Wararka Maanta: Arbaco, Apr 10, 2013-Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia iyo Wafdigiisa oo la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Norway (SAWIRRO)
Furitaankii kulanka ayaa waxaa khudbado qiimo badana ka jeediyay xubno uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Norway, Espen Barth Eide oo sheegay in dalkiisu uu ku faraxsa yahay isbedellada ka muuqda Soomaaliya kaddib sannado badan oo colaado ah, isagoo xusay in dowladdiisu ay mar walba garab taagan tahay Soomaaliya.
Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway oo iyaguna hadal ka jeediyay munaasabada ayaa aad u amaanay isbedelka ay la yimaadeen madaxda dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya; waxayna bogaadiyeen guulaha siyaasadda iyo kuwa milateri ee ay dowladdu gaartay muddadii ay jirtay.
Xildhibaanad Khadiijo Max’ed Diiriye oo ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul-insaanka baarlamaanka ayaa hadal ay jeedisay ku tilmaantay inay aad ugu faraxsan tahay dareenka ay muujiyeen Soomaalida Norway ku nool, iyadoo xustay inay fariinta jaaliyaddu u dhiibeen ay kula laaban doonaan dalka.
Xildhibaan, Xuseen Carab Ciise oo isaguna ka mid ah xildhibaanadii goobta ka hadlay ayaa ka hadlay guulaha ay dhanka ammaanka ah ee la gaaray tan iyo markii dowladdan la dhisay, isagoo qurbo-joogta ugu baaqay in ciidanka xogga dalka ay siiyaan taageero buuxda.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo isaguna khudbad jeediyey ayaa ugu uga mahadceliyay dowladda Norway sida ay u garab-taagan tahay shacbiga iyo dowladda Soomaaliya lagasoo billaabo muddadii uu dalka burburku galay illaa hadda oo uu dalku yeeshay dowlad rasmi ah.
Sidoo kale, Jawaari ayaa ku boorriyay qurba-joogta Soomaaliyeed inay dib ugu soo laabtaan dalkooda isla markaana ay ka qaybqaataan hormarka jira. Isagoo xusay in dadka Soomaaliyeed ay mar walba ilaaliyaan midnimadooda iyo sharaftooda.
Kulanka oo ka dhacay hool-weyn oo ku yaalla bartamaha caasimadda Norway ee Oslo ayaa kusoo dhammaaday jawi wanaagsan waxaana xusid mudan in guddoomiyaha baarlamaanka la gudoonsiiyey billad sharaf, iyadoo dhanka kalena ay jaaliyadda iyo wafdiga guddoomiyaha ay dhexmaray doo dada u xiiso badan oo ku saabsan isbedelka dalka ka dhacay.
Wafdiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ah: guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka, Jeeylaani Nuur Iikar, guddoomiyeyaasha 15-ka guddi ee baarlamaanka iyo saraakiil ka tirsan xafiiska guddoomiyaha; waxaana wafdigu ay maanta hortagi doonaan baarlamaanka dalka Norway.